Khabiirka Xuquuqda Aadana ee QM u qaabilsan Soomaaliya oo hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 13 December 2014 13 December 2014
13 December 2014. Khabiirka Madaxabanaan ee xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliya, Mudane Bahame Nyanduga, ayaa maanta soo gebogabeeyay safarkiisi shaqo ee ugu horreeyay oo uu ku tegay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Mr Nyanduga, oo Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Mudoobay uu magacaabay, ayaa loo xilsaaray inuu ku taageero Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) horumarinta tayada iyo kaalmo farsamo oo ah dhinaca xuquuqda aadanaha.
Intii uu booqashada ku guda jiray, Khabiirka Madaxabanaan wuxuu Dowladda Federaalka ku amaanay meelmarinta Qorshe Howleedka Qaran ee la-dagaallanka xadgudubka dumarka. Wuxuu sidoo kale ku bogaadiyay Dowladda horumarka tartiib-tartiibka ah ee xaaladda siyaasadda iyo amniga, hanaanka socda ee lagu dhisayo maamul-goboleedyada federalka iyo tallaabooyinka nabadaynta iyo xasilinta goobaha dhowaan la xoreeyay, kuwaas oo dhamaantood ah tallaabooyin muhiim u ah gaarista hiigsiga 2016.
Mr Nyanduga wuxuu walaac ka muujiyay caqabadaha xagga tayada iyo dhaqaalaha ee hakinaya horumarka xoojinta hay’adaha garsoorka, caqabadahaas oo kaalin ka qaatay inay ballaarato kaalinta maxkamadaha milatariga oo maxkamadeeynaya dad rayid ah. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay Dowladda inay ka soo baxdo ballanqaadki ay gashay oo ahaa inay hakiso adeegsiga ciqaabta dilka ah, kana mid ah hanaanka Dib-u-eegista Xilliyeysan ee Caalamiga ah. Iyadoo taa la eegayo, ayuu ku boorriyay Dowladda Federaalka inay ku dhaqaaqdo wadatashiyo degdeg ah oo lala sameeyo dadka arrintu khuseyso, kuwaas oo looga dan-leeyahay diyaarinta iyo soo gudbinta warbixinteeda bisha Oktoobar 2015 si loogu diyaar garoobo Dib-u-eegista Xilliyeysan ee Caalamiga ah sanadka 2016.
Khabiirka Madaxabanaan wuxuu yiri “Dowladda Federaalka, iyadoo kaashaneysa beesha caalamka, waxay u baahantahay in loo qoondeeyo dhaqaale ku filan oo lagu xoojiyo hay’adaha u xilsaaran sarreynta sharciga iyo in la xaqiijiyo in maamul goboleedyada ku-meelgaarka ah ay ka faa’iideystaan Heshiiska Hiigsiga Cusub ee Soomaaliya. Sidoo kale, Dowladdu waa inay ansixisaa sharciyada muhiimka ah ee xuquuqul insaanka caalamiga oo ay ka mid yihiin Heshiiska Xuquuqda carruurta iyo xeerkiisa ikhtiyaariga ah ee ku saabsan carruurta qeybta ka ah dagaallada hubeysan iyo Heshiiska Ciribtirka Dhamaan Noocyada Takooridda Ka-dhanka ah Haweenka (CEDAW).”
“Sidoo kale, waxaan ugu baaqayaa maamullada inay xaqiijiyaan in warbaahinta loo ogolaado xaqa ay u leeyhiin xorriyadda hadalka iyo sidoo kale in la xaqiijiyo amniga warfidiyeenada. Isla markaana, waxaa waajib ku ah Warbaahinta inay u tebiyaan wararka si xirfad oo mas’uuliyad ku dheehantahay,” ayuu raaciyay.
Khabiirka Madaxabanaan wuxuu ku boorriyay Dowladda Federaalka inay xaqiijiso in mabaadi’da iyo halbeegyada caalamiga ah ee xuquuqul insaanka lagu daro marka la gudbinayo sharciyada kala duwan, oo ay ka mid yihiin hindise sharciyeedka warbaahinta iyo midka ka-hortagga argagixisada. Sidoo kale, wuxuu ku baaqay in si degdeg ah loo gudbiyo hindise sharciyeedka lagu sameeynayo hay’adda Qaran ee xuquuqda aadanaha.
Mr Nyanduga wuxuu booqday magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Garowe iyo Hargeysa sideedii maalmood ee safarkiisa shaqo uu ku guda jiray, wuxuuna wadahadallo la yeeshay Siihayaha Wasiirka Arrimaha Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ee DFS, Xeer-ilaaliyaha Guud iyo madax kale oo sare oo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, Hogaamiye ku-xigeenka Labaad ee Maamulka Kumeelgaarka Jubba, Wasiirada Maamulka Kumeelgaarka Jubba, Madaxweynaha Maamulka Puntland, Wasiirro iyo madax sare oo ka tirsan Maamullada Puntland iyo Somaliland.
Khabiirka Madaxabanaan wuxuu sidoo kale shirar la qaatay Nicholas Kay, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) ahna Madaxa Howlgalka Qaramada Midoobay ee Kaalmaynta Soomaaliya (UNSOM), madax ka socotay hay’adaha, sanaadiiqda iyo barnaamijyada Qaramada Midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya iyo weliba hay’adaha aan dowliga ahayn ee caalamiga ah ee kuwa dalka ka dhisan iyo Warbaahinta.
Mudane Nyanduga wuxuu ku talajiraa inuu booqasho labaad ku yimaado Soomaaliya ka hor inta uusan warbixintiisa iyo talooyinkiisa u gudbin Golaha Qaramada Mudoobay ee Xuquuqda Aadanaha bisha September 2015, taas oo looga danleeyahay in lagu kaalmeeyo Dowladda sidi ay u gudan lahayd waajibaadka ka saaran xuquuqda aadanaha.
Baarlamaanka Soomaaliya oo u yeeray Xeer Ilaaliyaha & Hanti Dhowrka Qaranka